Iincwadi ezili-10 eziphezulu ze-selenium webdriver
Eyona Selenium Iincwadi ezili-10 eziphezulu zeSelenium WebDriver
Iincwadi ezili-10 eziphezulu zeSelenium WebDriver
Nalu uluhlu lwethu lweeNcwadi ezili-10 zeSelenium WebDriver onokuzisebenzisa ukufunda iSelenium. Iincwadi zahlukile kwaye zezabaqalayo kubasebenzisi abaphambili kunye nemizekelo emininzi eluncedo.
Selenium 2 Izixhobo zovavanyo: Isikhokelo saBaqalayo
Funda ukusebenzisa izixhobo zovavanyo lweSelenium ukusuka ekuqaleniZenzekelayo izikhangeli zewebhu ngeSelenium WebDriver ukuvavanya usetyenziso lwewebhuSeta iJava yokusiNgqongileyo ngokusebenzisa iSelenium WebDriverFunda iipateni zoyilo ezilungileyo zokuvavanya usetyenziso lwewebhu. I-Selenium inenkxaso yabanye abathengisi abakhulu bebhrawuza abathathe (okanye bathatha) amanyathelo okwenza i-Selenium ibe yinxalenye yemveli yesikhangeli sabo.
Ukusuka ekumiseleni imeko yeJava ekuqhubeni iimvavanyo kwizixhobo eziphathwayo, iqulethe lonke ulwazi lokufumana i-novice kunye nokusebenzisa iSelenium..Uya kufunda ezinye iikhonsepthi eziphambili njengokuvavanya usetyenziso lwewebhu olunzima kunye nokuqhuba iimvavanyo ngokuhambelana Ukuphela kwencwadi. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Uvavanyo oluzenzekelayo usebenzisa iSelenium Webdriver ngeJava: Isikhokelo seNyathelo ngeNyathelo
Uvavanyo oluzenzekelayo usebenzisa iSelenium WebDriver, yincwadi yakutshanje ekhutshwe kwiSelenium 2.0 isebenzisa iJava njengolwimi lwenkqubo. Le ncwadi ye-Selenium yenzelwe iinjongo zokulula kunye nokulula kokuqonda. Emva kwempumelelo enkulu yencwadi yokuqala yombhali uNavneesh Garg (Uvavanyo lokuZenzekelayo usebenzisa uVavanyo oluSebenzayo oluSebenzayo) le ncwadi ilandela inyathelo elifanayo ngenyathelo lokufaka, ukumisela kunye noyilo lwesakhelo esizisebenzelayo sisebenzisa iSelenium WebDriver kunye nezinto zalo. Iinkcukacha ezithe vetshe…
I-Selenium yenziwe lula: I-Selenium-RC, iJava kunye neJUnit
Uhlaziyo lwesibini oluhlaziyiweyo lwesikhokelo esithandwayo sokufundisa kuvavanyo oluzenzekelayo. I-Selenium yenye yezona zixhobo zaziwayo zokuvula izixhobo ezivulekileyo ezikhoyo namhlanje. Ukuqonda iSelenium-RC kunye nokubhala iimvavanyo ezizenzekelayo kulwimi lwenkqubo kufunwa emva kwezakhono kwimakethi yomsebenzi kunye nendlela entle yokwandisa isibonelelo kuvavanyo oluzenzekelayo.
Ngokuchasene neenkolelo zabavavanyi abaninzi, ukufunda ikhowudi akufuneki kube nzima okanye kube nzima. I- 'Selenium Simplified' ikuthatha kwinkqubo yokufaka kunye nokufunda ukusebenzisa zonke izixhobo ezisisiseko ezifunekayo ukubhala iimvavanyo ezizenzekelayo usebenzisa iJava njengolwimi lwenkqubo.
Kubhalwe kwisitayile sokufundisa, le ncwadi ikunceda ukuba ufunde ikhowudi nokuba khange uyicwangcise ngaphambili. Akukho xesha lichithwayo kwithiyori yokuzenzekelayo okanye ukugoba ngezixhobo. Le ncwadi igxile kulwazi olusebenzayo olufunekayo ukuzenzekelayo iimvavanyo zeenkqubo zemveliso. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Iipateni zoyilo lweSelenium kunye neZenzo eziBalaseleyo
Nokuba ungumphuhlisi onamava weWebDriver okanye umntu osandula ukunikwa umsebenzi wokudala iimvavanyo ezizenzekelayo, le ncwadi yeyakho. Kuba izimvo kunye neengcinga zichaziwe ngamagama alula, akukho mava angaphambili kwikhowudi yekhompyuter okanye kwinkqubo edingekayo. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Isikhokelo seSelenium WebDriver esiSebenzayo
I-Selenium WebDriver sisixhobo esizisebenzelayo sewebhu se-UI esizisebenzelayo esisebenza ngesikhangeli esithile somqhubi, othumela imiyalelo kwisikhangeli kunye nokufumana iziphumo.
Isikhokelo seSelenium WebDriver esiSebenzayo siya kukukhokela kwii-API ezahlukeneyo zeWebDriver ekufuneka zisetyenzisiwe kuvavanyo lokuzenzekelayo, zilandelwe yingxoxo yeenkqubo ezahlukeneyo zeWebDriver ezikhoyo.
Esi sikhokelo siyakukuxhasa ngokunikezela ukufikelela kwiifayile zekhowudi yemithombo, kubandakanya iifayile ze-HTML ezifanelekileyo, ezikuvumela ukuba usebenze nge-jQuery kunye neminye imizekelo kwincwadi yonke. Okokugqibela, uya kufumana inkcazo enzulu malunga nendlela yokujongana nezinto zamva nje zeWebDriver ngokusebenzisa inyathelo ngamanyathelo eetutorials. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Iincwadi zokupheka zeSelenium
'I-Selenium Testing Tools Cookbook' sisikhokelo esiza kukunceda ufunde kwaye usebenzise izinto eziphambili zeSelenium WebDriver API kwiimeko ezahlukeneyo zokwakha uvavanyo oluzenzekelayo. Uya kufunda ukuba ungazisebenzisa njani ngokufanelekileyo izinto zeSelenium usebenzisa imizekelo elula neenkcukacha. Le ncwadi iyakukufundisa ezona ndlela zilungileyo, iipateni zoyilo, kunye nendlela yokwandisa iSelenium.
'I-Selenium Testing Tools Cookbook' ibonisa abaphuhlisi kunye nabavavanyi abasele besebenzisa i-Selenium, indlela yokuya kwinyathelo elilandelayo kunye nokwakha isikhokelo sovavanyo esinokuthenjwa nesinokuthenjwa kusetyenziswa izixhobo eziphambili zesixhobo. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Ukulawula iSelenium WebDriver
Le ncwadi iqala ngendlela yokusombulula iingxaki ezinzima oya kuthi uhlangane nazo ngokungathandabuzekiyo xa uqala ukusebenzisa iSelenium kwindawo yeshishini, kulandele ukuvelisa ingxelo eyiyo xa usilele, kwaye zeziphi izinto ezingafaniyo, zichaze kakuhle (kubandakanya unobangela ) kwaye ndikuxelele indlela yokuzilungisa. Uya kubona kwakhona umahluko phakathi kokulindwayo okungagungqiyo okukhoyo kunye nokulinda okucacileyo, kwaye ufunde ukusebenza ngezinto ezisebenzayo zephepha.
Ekugqibeleni, incwadi iya kuxoxa malunga ne-Selenium W3C echaziweyo kwaye iza kulichaphazela njani ikamva leSelenium. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Isixhobo sokuVavanya ngokukhawuleza seSelenium
'I-Instant Selenium Testing Tools Starter' yazalwa ngaphandle kwesidingo sencwadi emfutshane, kodwa yonke into enokukunika isiseko esiqinileyo ekudaleni nasekuqhubeni iimvavanyo ngezixhobo zovavanyo zeSelenium. Le ncwadi iya kwenza ukuba ukwazi ukusebenzisa amandla eSelenium kwaye uyisebenzise kakuhle kwinkqubo yovavanyo, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
'Isixhobo sokuQala sokuSebenza seSelenium esingaSebenzi' sinokusetyenziswa njengesikhokelo sokuphela kokuphela okanye njengereferensi yedesika, enamacandelo ajongene nayo yonke imiba ephambili yokwenza iimvavanyo zokufaka izicelo zewebhu. Inkcazo yenyathelo ngenyathelo yeempawu eziphambili zibonelelwa ngoncedo lwemizekelo elula necacileyo.
Isahluko ngasinye siya kukunceda uqonde ezona mpawu ziphambili zeSelenium ngeengcebiso kunye namaqhinga aya kuba sisiseko solwazi lwakho kwixa elizayo. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Ukuzaliswa yimizekelo ebonakalayo, ukuthatha inyathelo ngenyathelo ngenyathelo leSelenium Ngomzekelo-Umqulu Iii: I-Selenium WebDriver ayizukunika umfundi kuphela isishwankathelo kunye nokwazisa ngeSelenium WebDriver, iya kuthi inike umfundi isishwankathelo seyona misebenzi ilungileyo kuvavanyo oluzenzekelayo. , Izakhelo zokuZenzekelayo, kunye neengcebiso zokwazisa uVavanyo oluzenzekelayo. I-Selenium Ngomzekelo-Umqulu Iii: I-Selenium WebDriver ithatha inyathelo ngenyathelo lokufundisa umfundi ukuba asebenzise njani ngokufanelekileyo iSelenium WebDriver. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Iiresiphi zeSelenium Webdriver kwi-C # 2015
Sombulula iingxaki zakho zeSelenium WebDriver ngesi sikhokelo sikhawulezayo kuvavanyo oluzenzekelayo lwezicelo zewebhu ngeSelenium WebDriver kwi-C #. I-Selenium WebDriver Recipes kwi-C #, uHlelo lwesiBini luqulathe amakhulukhulu ezisombululo kwiingxaki zehlabathi lokwenyani, ezineenkcazo ezicacileyo kunye nokulungiselela ukuqhuba izikripthi zovavanyo zeSelenium onokuzisebenzisa kwiiprojekthi zakho. Iinkcukacha ezithe vetshe…
Isifundo seSelenium: Funda ukuZenzekelayo kwesiKhangeli se-UI
Uvavanyo lobomi bebhetri yeGoogle pixel
Qaphela 20 vs inqaku 20 ultra
I-Galaxy enkulu ye-4 ibonelela ngokuvuza kubonisa uyilo olutsha kuyo yonke imibala
I-LG Phoenix Plus yeyona fowuni intsha ihlawulelweyo ye-AT & T, i-Android Oreo kunye nesikena seminwe ebhodini
Amalungu eNkulumbuso anokufumana i-10 yeedola kwi-Amazon Prime Day
Oyena mphathi we-US? Le Verizon vs AT & T vs T-Mobile vs Sprint iimephu zokugubungela i-GIF ixelela konke
Uthotho olunamandla lwe-Apple Watch 5 luyathengiswa ukuya kuthi ga kwisaphulelo esikhulu se- $ 300
Ukuhlaziywa kweFitbit yokuHlawula uHR